NTUZIAKA WINDOWS 10 GỊ KWỤSỊRỊ - WINDOWS - 2019
Esi ewepu ozi "Windows 10 gị ikike kwusi"
Mgbe ụfọdụ mgbe ị na-eji Windows 10, ozi nwere ike bịa na mberede na ederede "Ikikere Windows 10 gị kwụsịrị". Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi dozie nsogbu a.
Anyị na-ewepu ozi njedebe nke ikike
Maka ndị ọrụ nke ntinye Nkeji edemede, ọdịdị nke ozi a pụtara na njedebe oge ikpe nke sistemụ arụmọrụ na-eru nso. Maka ndị ọrụ nke nsụgharị nke "iri iri," ozi dị otú ahụ bụ ihe doro anya nke ọdịda software. Ka anyị chọpụta otú ị ga-esi wepụ akwụkwọ a na nsogbu ahụ n'onwe ya.
Nzọụkwụ 1: Mee oge ikpe ahụ (Nchịkọta Nchịkọta)
Ụzọ mbụ ị ga - esi edozi nsogbu nke ga - adabere na nke Windows 10 bụ iji tọgharịa oge ikpe, nke a ga - eme ya "Iwu iwu". Ọ na-eme dị ka ndị a:
Meghee "Iwu Iwu" usoro ọ bụla bara uru - dịka ọmụmaatụ, chọpụta ya "Chọọ" ma na-agba ọsọ dịka onye nlekọta.
Ihe omumu: Na-agba "Line Order" dị ka onye nchịkwa na Windows 10
Pịnye iwu na-esonụ ma mechaa ya site na ịpị "Tinye":
Iwu a ga-eme ka ikikere nke Ntinye ngosi Ntinye aka nke ọzọ ruo 180 ụbọchị. Biko mara na ọ na-arụ naanị otu oge, ọ gaghị arụ ọrụ ọzọ. Ị nwere ike ịlele oge fọdụrụ site na onye ọrụslmgr.vbs -dli.
Mechie ngwá ọrụ ahụ ma malitegharịa kọmputa iji kweta mgbanwe ndị a.
Usoro a ga - enye aka wepu ozi banyere njedebe nke ikikere Windows 10.
Ọzọkwa, ọkwa ahụ nwere ike ịpụta na ikpe ahụ mgbe mbipute Insider Preview bụ oge ochie - na nke a, ịnwere ike idozi nsogbu ahụ site na ịwụnye mmelite ọhụrụ.
Ihe Ọmụmụ: Ịkwalite Windows 10 ka ọ kachasị ọhụrụ.
Usoro 2: Kpọtụrụ Nkwado Microsoft
Ọ bụrụ na ozi yiri nke ahụ gosipụtara na Windows 10, ikikere ọda ngwanrọ. O nwekwara ike ịbụ na ndị ọrụ os na-arụ ọrụ nke OS weere isi na-ezighị ezi, nke mere kpatara ikikere ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, agala na-enweghị ịkpọtụrụ nkwado ntanetị nke ụlọ ọrụ Redmond.
Mbụ ị ga-achọ igodo ngwaahịa - jiri otu n'ime ụzọ ndị dị na ntuziaka dị n'okpuru.
More: Otu esi achọta koodu mmeghe na Windows 10
Ọzọ, meghee "Chọọ" ma malite ịde nkwado nkwado. Nsonaazụ kwesịrị ịbụ ngwa sitere na Ụlọ Ahịa Microsoft na otu aha - na - agba ya.
Ọ bụrụ na ị naghị eji Ụlọ Ahịa Microsoft, ị nwekwara ike ịkpọtụrụ nkwado site na iji ihe nchọgharị site na ịpị na hyperlink wee pịa ihe ahụ "Kpọtụrụ nkwado na ihe nchọgharị"nke dị na ebe akara na nseta ihuenyo n'okpuru.
Nkwado ụzụ Microsoft nwere ike inyere gị aka dozie nsogbu ọsọ ọsọ ma rụọ ọrụ nke ọma.
Enwere ike iwepu nkwuputa banyere njedebe nke mmalite. N'ezie, nke a agaghị edozi nsogbu ahụ, ma ozi iwe ahụ ga-apụ n'anya. Soro algọridim a:
Kpọọ ngwá ọrụ ịbanye iwu (na-ezo aka na ụzọ mbụ, ọ bụrụ na ị maghị otú), deeslmgr -rearmwee pịa Tinye.
Mechie ntuziaka ntinye iwu, wee pịa igodo ọnụ Nweta + R, dee na mpaghara ntinye aha nke akụrụngwa ọrụ.msc wee pịa "OK".
Na njikwa ọrụ Windows 10, chọta ihe ahụ "Njikwa Ikikere Ọrụ Windows" ma pịa bọtịnụ akaekpe aka ya abụọ.
Na njirimara nke akụrụngwa pịa bọtịnụ ahụ "Nkwarụ"na mgbe ahụ "Tinye" ma "OK".
Ọzọ, chọta ọrụ ahụ "Mmelite Windows"wee pịa ya abụọ Paintwork ma soro nzọụkwụ na nzọụkwụ 4.
Mechie ngwaọrụ nchebe ọrụ ma malitegharịa kọmputa ahụ.
Usoro a kọwara ga-ewepu ọkwa ahụ, ma, ọzọ, enweghi ike iwepụ nsogbu ahụ, ya mere lezie anya ịgbatị oge ikpe ahụ ma ọ bụ zụta ikike Windows 10.
Anyị nyochaa ihe kpatara ozi ahụ "Windows 10 gị na-akwụ ụgwọ" na amara usoro nke nsogbu nsogbu ma nsogbu ahụ ma ọkwa n'onwe ya. N'ịkọtara elu, anyị na-echeta na software ikikere ahụ adịghị enye gị ohere ịnweta nkwado site n'aka ndị mmepe, ma ọ dịkwa nnọọ nchebe karịa ngwanrọ egwu.